Dagaallo maanta ka dhacay bariga Laascaanood iyo dhinacyada oo haatan ku jira is abaabul – Radio Daljir
Dagaallo maanta ka dhacay bariga Laascaanood iyo dhinacyada oo haatan ku jira is abaabul
Maarso 7, 2011 12:00 b 0
Laascaanood, Mar 07 ? Dagaallo ayaa lagu soo waramayaa in ay maanta ka dheceen bariga magaalada Laascaanood halkaas oo aan wali faahfaahin rasmiya laga helin khasaaraha ka dhashay. Dagaalkan ayaa ka dhex-qarxay ciidamada Somaliland ee gobolka haystay sannadihii la soo dhaafay iyo ciidamo-beeleedyo wax-iska-caabis ku jira.
Caaqli Maxamed Xaaji oo ka mida odayaasha degaanka ee wax ka olalaynaya dagaalladan ayaa Daljir u sheegay in ciidamada Somaliland ee fadhiyay meesha loo yaqaan Gambarre ay weerar kusoo qaadeen goob ay fadhiyeen ciidamo-beeleed u dhashay gobolka oo uu hogaaminayo Axmed Karaash halkaasna ay labada ciidan foodda isku daree.
Waxa uu sheegay in ay aan lahayn wali khasaaraha dhabta ah ee goobta ka dhacay balse waxa uu caaqilku intaa ku daray in ay ciidamada Somaliland ka riixeen goobtii hore ee ay fadhiyeen, khasaarena gaarsiiyeen. Caaqilku waxa uu hadda sheegay in ay xaaladdu dagan tahay ciidamada Soomaaliland-na ay ku sugan yihiin agagaarka Maraaga oo uu ugu yimid ciidan kale oo gurmad ah.
Axmed Karaash ayaa horay u ahaa wasiir ka tirsan dawladda Puntland, balse ma cadda in ay dawladda Puntland si toos ah gacan ugu leedahay dagaalladan. Dhawaan ayuu madaxwaynaha Puntland waxa uu Somaliland ugu baaqay in ay ka baxdo gobollada Sool iyo Cayn, waxana uu intaa ku daray in dawladdiisu ayan gacmaha ka laaban doonin xaaladda ee ay difaaci doonaan dadka iyo dalka.
Dagaalladan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyada oo ay maalmahani xasillooni ka jirto tuulooyinka iyo balliyada hoos yimaada gobolka Cayn ee Kalshaale, Hagoogane iyo Maygaagle.
Laascaano oo ah xarunta gobolka Sool waxa lixdii sano ee ugu dambeeyay ka talinayay ciidamada Somaliland. Gobolka Sool ayaa waxa uu ka midyahay goobo ay in muddo ah isku haysteen dawladaha Puntland iyo Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya, kuwaas oo ay gooboha ugu xasilloon dalka.